Puntland iyo Imaaraadka Carabta oo saaka Bossaso ku ballansan – Radio Daljir
Abriil 16, 2018 2:46 b 1
Saraakiil sarsare oo ka socda dawladda Imaaraadka Carabta ayaa Sabti galinkii dambe soo gaaray magaalada Bossaso si ay ula kulmaan madaxweynaha Puntland, kalana xaajoodaan arrimo khuseeya xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya DFS iyo imaaraadka Carabta, laakiin taasi ma ay suurtoobin maadaama Madaxweyne Gaas uu u bakhooley Carmo iyo Caanashubka Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Xaaji Cabdulaahi.
Sida ilo xogogaal ahi, ahna xubno ka tirsan dawladda Puntland ay Radio Daljir u xaqiijiyeen, Madaxweyne Gaas oo u ballansan kulanka sarakiisha Imaaraadka waxa uu xalay ku soolaabtay Bossaso iyo Madaxtooyada.
Warar hordhac ah oo Radio Daljir saaka helayo ayaa sheegaya in kulanka labada dhinac uu ku qotomo xal-u-helidda xiisaddii ka dhalatay xiriirka sii xumaanaya ee DFS iyo Imaaraadka iyo taageerada Imaaraadku siiyaan Ciidamada Booliska Badda Puntland (PMPF).
Sida aan hore u baahinay, saraakiisha Imaaraadka ee masuulka ka ah kormeerka ciidamadda Booliska Badda Puntland ayaa subixii Sabtida ee 14ka bishaan ka baxey Bossaso iyaga oo markii hore isku dayey in ay rartaan qaar qalabkii yaallay xerada ciidanka, balse maamulka Puntland uu ka reebay qalabkaas, ayna dhoofeen iyaga oo faramaran.
Wararka qaar waxa ay intaas ku darayaan in khilaafka iyo bixitaanku uusan aheyn mid amarkiisu uu markii hore ka yimid Abu Dhabi, laakiin uu ahaa amar uu bixiyey safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Xamar. Warar kale ayaa waxa ay intaas ku darayaan in saraakiisha Imaaraadka ee Bossaso ka dhoofey badankoodu ay ahaayeen kuwii Xamar ka yimid, kuwii Bossaso joogeyna ay dhexdooda isku khilaafeen ka baxa Puntland.
Ilo ka agdhow xukuumadda Puntland ayaa Radio Daljir u sheegay in maanta oo Isniin ah uu Madaxweyne Gaas shaacin doono mowqifka dowladda Puntland ee la xiriira ammuuraha Ciidamada Booliska Badda Puntland iyo doorka dowladda Imaaraadka.
Radio Daljir oo la xiriirey ganacsato ku xeeran howlaha Ciidamada Booliska Badda Puntland iyo xiriirka Imaaraadka ayaa rajo ka muuijiyey in arrinku uusan aheyn sida la moodayo, uu yahay khilaaf Imaaraadka dhexdooda ku eg, lana rajeynayo in isfaham buuxa arrinkaas laga gaari doono isla maanta oo Isniin ah.
Saas oo ay tahay, rajana laga qabo isfaham buuxa oo dhexmara Imaaraadka iyo Puntland, hadana wargeyska WAM ee ku hadla afka dowladda Imaaraadka maanta galinkii danbe waxa uu shaaciyey in dowladda Imaaraadku ay “go’aan ku gaartay in ay kala dirto oo joojiso barnaamijkii tababarka ciidamada Soomaaliya ee biloowdey sannadkii 2014, korna loogu qaadayey awoodda iyo xirfadda ciidamada Soomaaliya.”
Go’aanka ayaa lagu sababeeyey in uu ka dhashay wareeggii dowladda Soomaaliya ay Imaaraadka kala wareegtay lacag dhan $9.6 milyan oo si sharci darro ah dalka ay ku soo gelisay diyaarad ka soo duushay Abu Dhabi, caasimadda dalka Imaaraadka.
Ciidamada Booliska Badda Puntland (PMPF) oo la aasaasay sannadkii 2010 ayaa qoraalka wargeyska WAM lagu sheegay in ay dowladda Imaaraadku tababartay, masuulna ka tahay kormeerka ciidamadaas oo qaabilsan ladagaallanka burcad-badeeda iyo argagixisada.
Illaa iyo hadda dowladda Puntland kama aysan hadlin, warsaxaafadeedna kama aysan soo saarin ka bixitaanka ay dowladda Imaaraadku saraakiisheeda kala baxday Bossaso iyo mowqifka dowladda Puntland ee xiriirka qarka ka sii dhacaya ee DFS iyo Imaaraadka Carabta.
ileem iskuma talisadu dadka dhamma kasiman Soomaalida uunba uheestay